उच्च शेयर मूल्य रहेका लघुवित्त कम्पनीहरू पहिलो त्रैमासमा कस्तो देखिए ? - Aarthiknews
उच्च शेयर मूल्य रहेका लघुवित्त कम्पनीहरू पहिलो त्रैमासमा कस्तो देखिए ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउनका निम्ति अनुमति लिएका ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ६५ वटा पुगेको छ ।
मंगलबार, ०४ मंसिर २०७५
काठमाडौं, मंसिर ४ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित भइरहेको छ । नेपाल स्टक मार्केटमा उच्च शेयर मूल्य रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
६५ वटा कम्पनीहरुमा ३८ वटा कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत रहेका छन् । ६५ वटा कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म पहिलो त्रैमासमा ४४ वटा कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अन्य कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ ।
चुक्ता पुँजी तथा खुद नाफा
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४४ वटा कम्पनीमध्ये १ अर्ब चुक्ता पुँजी रुपैयाँ पुर्याउने छिमेक लघुवित्त र निर्धन उत्थान बैंक रहेका छन् ।
५० करोडमाथि चुक्ता पुँजी हुने आरएमडीसी लघुवित्त, डिप्रोक्स लघुवित्त, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, ग्रामीण लघुवित्त, आरएसडीसी लघुवित्त, साना किसान विकास लघुवित्त र स्वावलम्बन लघुवित्त रहेका छन् ।
लघुवित्त विकास बैंकमा सबैभन्दा कम चुक्ता पुँजी नागरिक लघुवित्तको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४४ वटा कम्पनीमा पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा कमाउनेमा सबैभन्दा बढी छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । जसले यस त्रैमासमा १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस कम्पनीले ९३ दशमलव ५८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । उक्त कम्पनीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेमा तथा नोक्सानमै रहेका कम्पनीहरु सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स, आरम्भ माइक्रोफाइनान्स, गुराँस लघुवित्त र नागरिक लघुवित्त वित्तीय रहेको छ । जसको क्रमशः ९ लाख, १७ लाख र २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा माथि कमाउनेमा ७ वटा कम्पनी रहेका छन् । नयाँ नेपाल लघुवित्त, किसान माइक्रोफाइनान्स, स्वदेशी लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, नेरुडे लघुवित्त र आरएसडीसी लघुवित्त रहेका छन् ।
जसमा सबैभन्दा बढी मुनाफा बढाउने नयाँ नेपाल लघुवित्तको ७१५ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि गरी २१ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । दोस्रो स्थानमा किसान माइक्रोफाइनान्सको ६५ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ८५ लाख रुपैयाँ कमाएको छ भने तेस्रो स्थानमा स्वदेशी लघुवित्तले २१८ दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि गरी ८३ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।\_
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले १७८ दशमलव ५७ प्रतिशत, मिथिला लघुवित्त १४० दशमलव ७९ प्रतिशत, नेरुडे लघुवित्तको १४० दशमलव ७९ प्रतिशत र आरएसडीसी लघुवित्तले १२९ दशमलव ११ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा ३२ वटा कम्पनीले नाफा बढाएका छन् । त्यस्तै ११ वटा कम्पनीले नाफा घटाएका छन् । गत वर्ष एउटा कम्पनीले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको थिएन ।
नाफा घटाउनेमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स, कालिका माइक्रोफाइनान्स, गुराँस लघुवित्त, एनएमबि माइक्रोफाइनान्स, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स, आशा लघुवित्त, गणपति मााइक्रोफाइनान्स, आरम्भ माइक्रोफाइनान्स, स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्स, सबैको लघुवित्त र इन्फिनिटी माइक्रोफाइनान्स रहेका छन् ।